प्रणाली आवाश्यकताहरू - सजिलो मल्टी डिस्प्ले - डिजिटल साइनेज सफ्टवेयर
व्यवसायका लागि डिजिटल साइनेज र भिडियो वाल सफ्टवेयर
बजारमा सब भन्दा सस्तो समाधान!
डिजिटल स्वागत स्क्रीन
फेसन र रिटेल
रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू
विद्यालय र शिक्षा
हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुहोस्
सिर्जना गरिएको अक्टूबर 31, 2019
1। सुरु गर्दै
← सबै शीर्षकहरू
इजि मल्टि डिस्प्लेको साथ सुरू गर्न तपाईले आफ्नो हार्डवेयर सेटअप सहि छ भनेर निश्चित गर्नु पर्छ र त्यो हो न्यूनतम प्रणाली आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस्। तलको यस गाइड अनुसरण गर्नुहोस् तपाईले आफ्नो कम्प्युटर सही तरीकाले कन्फिगर गर्नुभयो। इजि मल्टि डिस्प्लेबाट अधिक प्राप्त गर्न, हामी निम्न कन्फिगरेसन सिफारिस गर्दछौं।
विन्डोज १० चलिरहेको डेस्कटप कम्प्युटर।
किबोर्ड र माउस।
एक ग्राफिक्स कार्ड धेरै प्रदर्शन कनेक्ट गर्न सक्षम। *
* हाम्रो समर्थन लेख हेर्नुहोस् जुनमा ग्राफिक्स कार्ड प्रयोग गर्ने यहाँ।
PC को लागि कन्फिगरेशन
१ देखि Sc स्क्रीन सम्म
संचालन प्रणाली: जीत764 8.1-बिट / Win .64.१ 10-बिट / Win १०-64-बिट
प्रोसेसर: इंटेल कोर i5-2500K 3.3GHz / AMD FX-83504GHz
RAM: 8 जीबी
ग्राफिक्स कार्ड: NVIDIA GTX 1050 / Radeon RX 550
डिस्क ड्राइभ: SSD 240 जीबी
सिफारिस गरिएको कन्फिगरेसन
संचालन प्रणाली: विन्डोज 10 64- बिट
प्रोसेसर: इंटेल कोर i5-9600K 4,6 GHz / AMD Ryzen71800X 4GHz
राम: 16 जीबी
ग्राफिक्स कार्ड: Nvidia GTX 1660 / AMD Radeon RX 580
डिस्क ड्राइभ: SSD 480 जीबी
Sc स्क्रीन संग
प्रोसेसर: इंटेल कोर i7-9700K 4,9 GHz / AMD Ryzen73800X 4,5GHz
राम: 32 जीबी
ग्राफिक्स कार्ड: Nvidia RTX 1660 / AMD RX VEGA
के म मेरो ल्यापटप प्रयोग गर्न सक्छु?
हुनसक्छ। यो तपाइँ प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ कति टिभी डिस्प्लेहरूमा निर्भर गर्दछ।
धेरै ल्यापटपहरू केवल १ प्रदर्शनका लागि पर्याप्त प्रदर्शन एडेप्टर (भौतिक कनेक्शन पोइन्टहरू) हुन्छन्। जहाँसम्म, यदि तपाईंलाई यी सबै चाहिन्छ भने, तब विन्डोज १० चलिरहेको ल्यापटपले ठीक काम गर्नेछ।
यदि योर ल्यापटप हालको हो (एक बर्ष भन्दा कम पुरानो) र उच्च गुणस्तरको (€ 700 +) र युएसबी p पोर्टहरू छन् भने, तपाईं यस प्रकारको कन्भर्टर (USB3 देखि HDMI) प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ3वा २ स्क्रीनहरू थप्नका लागि।
यस उत्पादन किन्नका लागि कुञ्जी शव्दहरू: USB3 HDMI कन्भर्टर
के तपाईसँग अझै समस्याहरु छन्?
यदि तपाईंसँग अझै पनि प्रश्नहरू वा तपाईंको प्रदर्शन वा तपाईंको सेटिंग्ससँग समस्या छ भने, हाम्रो भ्रमण गर्न नहिचकिचाउनुहोस् FAQ, हाम्रो डाउनलोड गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता मार्गनिर्देशन वा हाम्रो ग्राहक सेवा मा सम्पर्क गर्नुहोस् समर्थन@easy-m Multi-display.com। हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं र तपाईंको राय सुन्न हामी खुसी हुनेछौं!
हाम्रो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाईं हाम्रो ईजी मल्टि डिस्प्ले सफ्टवेयरमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, क्लिक गर्नुहोस् यहाँ हाम्रो परीक्षण संस्करण डाउनलोड गर्न।
केहि लेख जुन हामीलाई मनपर्दछ र तपाईंलाई मनपर्दछ!
२०२१ मा कसरी डिजिटल साइनेज एक आवश्यक संचार उपकरण बन्यो
पोष्ट कोविड संसारमा डिजिटल साइनेज अन्वेषण गर्दै
डिजिटल साइनेज समाधानहरू र तपाईंको व्यवसायको लागि यसको अवसरहरूको बारेमा तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा
सजिलो बहु प्रदर्शन को लोगो
पालना र हामीलाई मन गर्नुहोस्:
कृपया हामीलाई पछ्याउनुहोस् र हामीलाई मनपराउनुहोस् :)
तपाइँका साथीहरू जस्तै गर्नुहोस्, हरेक महिना भुक्तानी गर्न रोक्नुहोस्
प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन चाँडै नै उपलब्ध छ (EMD V1.0.65) 🙂
इजि मल्टि डिस्प्ले est la समाधान son abonnement
Fite @lespassagersduvin, caviste du फ्यूटहरू सुरु गर्नुहोस्
Météo du Jour "Lorient" (फ्रान्स) sur l 'rancran 3
सजिलो बहु प्रदर्शन संग, तपाईं मात्र यो प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ
अधिक देखाउनुहोस् ... Suivre sur Instagram
| प्रतिलिपि अधिकार © इजि मल्टि डिस्प्ले २०२० डिजिटल साइनेज र व्यवसायका लागि भिडियो वाल सफ्टवेयर